Tag: tifaftiraha wordpress | Martech Zone
Tag: tifaftiraha wordpress
Froala WYSIWYG Tifatiraha Qoraalka Taajir
Waxaan la qaadanay degel macaamilkiisa oo lagu dhisay Elementor, oo ah soojiidasho iyo hoos u dhigis tafatirka ah ee loo yaqaan 'WordPress' oo wax ka beddelaya sida ugu fudud ee loo dhisi karo qaabab isku dhafan oo qurxoon oo jawaabi kara… barnaamij la'aan ama baahida loo qabo in la fahmo hababka gaagaaban. Elementor wuxuu leeyahay xoogaa xaddidaad ah, mid ka mid ah oo aan ku shaqeeyay ka shaqeynta goobta macmiilka. Waxay si fudud u doonayeen badhan ka furay fiidiyow Lightbox… wax Elementor uusan sameynin
Galabtaan, waxaan qaatay dhowr saacadood oo waxaan dhisay macmiilkeygii ugu horreeyay adoo adeegsanaya Elementor. Haddii aad ku jirtid warshadaha WordPress, waxaad u badan tahay inaad horey u maqashay guuxa ku saabsan Elementor, waxay kaliya garaaceen 2 milyan rakibid! Saaxiibkay Andrew, oo ka hawl gala NetGain Associates, ayaa ii sheegay sheyga oo waxaan hore u iibsaday ruqsad aan xad lahayn oo aan meel kasta uga hirgaliyo! WordPress waxay dareemaysay kuleylka ku saabsan awoodeeda edbinta waxashnimada ah. Waxay dhawaan u cusbooneysiiyeen Gutenberg,